ဆယ်​လီ – Page 21 – PoPinVdo
ကြည့်ရှုသူပရိသတ် သိန်းကျော်ရှိနေပီဖြစ်တဲ့ နေတိုးနဲ့ ငုယင်တို့ရဲ့ အနမ်းလေးတွေနဲ့ တိမ်တိုက်တံတား ဇာတ်ဝင်ခန်း.. (ရုပ်သံ) ဇွန်းဖိုင်းတယ်နော်
June 1, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီNo Comment on ကြည့်ရှုသူပရိသတ် သိန်းကျော်ရှိနေပီဖြစ်တဲ့ နေတိုးနဲ့ ငုယင်တို့ရဲ့ အနမ်းလေးတွေနဲ့ တိမ်တိုက်တံတား ဇာတ်ဝင်ခန်း.. (ရုပ်သံ) ဇွန်းဖိုင်းတယ်နော်
အနုပညာရှင် လောကမှာ နာမည်ကြီး ထိပ်တန်းမင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ မင်းသားတွေထဲမှာ အကယ်ဒမီ နေတိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နေတိုးဟာ ပြည်တွင်း အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သာမက ပြည်ပ နာမည်ကြီး…
LG Brand Ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်ခံလိုက်ရတဲ့ မေမြင့်မိုရ်
June 1, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီ / အနုပညာသတင်းNo Comment on LG Brand Ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်ခံလိုက်ရတဲ့ မေမြင့်မိုရ်
MRTV4ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကြီးလာသူတွေထဲမှာ မေမြင့်မိုရ်လည်း တစ်ယောက် အပါအ၀င်ပါ။ “ပန်းနုသွေး” ဆိုတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကြား လူသိများလာခဲ့တာပါ။ လတ်တလော ပြသနေတဲ့ ” အရိပ် ” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း…
ခေတ်နဲ့သစ်ဆီလာရောက် ပညာလေ့လာခဲ့ကြတဲ့ The Vioce မှပြိုင်ပွဲဝင်များ
June 1, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီ / ကြားရသိရသမျှNo Comment on ခေတ်နဲ့သစ်ဆီလာရောက် ပညာလေ့လာခဲ့ကြတဲ့ The Vioce မှပြိုင်ပွဲဝင်များ
ဒီကနေ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်တွေဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်ဆီသို့ The Voice Myanmar မှ ပြိုင်ပွဲဝင်များသွားရောက်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ အဖွဲ့သားများကို အဆိုတော်လင်းလင်းကိုယ်တိုင်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခေတ်နဲ့သစ်တို့ရဲ့ ချစ်စရာမြင်ကွင်းလေးတွေကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ လင်းလင်း၊ ချစ်သုဝေတို့ဇနီးမောင်နှံ့နှင့်အတူ ချစ်စရာသမီးလေးတွေရဲ့ချစ်စရာမိသားစုလေးနှင့်အတူ The Vioce…
ခြွေခွင့်ပြုပါ လို့ ဆိုလာတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
June 1, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီNo Comment on ခြွေခွင့်ပြုပါ လို့ ဆိုလာတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
ဧငြိမ်းဖြူကတော့ ရေဒီယိုကတ်ဆက်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ မင်း သမီး ချောလေးပါ။သူမရဲ့ Dance Video ဖိုင်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ လူသိ များပါတယ်။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးနဲ့ ကျော့ရှင်းလှပတဲ့ အလှမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ ဘယ်လို…
ထိုင်းမင်းသမီးလေး Noona နဲ့တူတယ်လို့အပြောခံရတဲ့အပေါ် တုံပြန်လိုက်တဲ့ စိုးပြည့်လေး….
June 1, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီNo Comment on ထိုင်းမင်းသမီးလေး Noona နဲ့တူတယ်လို့အပြောခံရတဲ့အပေါ် တုံပြန်လိုက်တဲ့ စိုးပြည့်လေး….
စိုးပြည့်က မတူပါဘူးတဲ့။ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကြောင့် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်နဲ့ ထိုင်းမင်းသမီးချောလေး Noona တို့ကို ပရိသတ်တွေက အမြွှာညီအစ်မတွေလားတဲ့။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ရုပ်ချင်းဆင်လှတာကြောင့် အမြွှာညီအစ်မတွေလားလို့ ထင်မိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျတစ်ခုမှာ…
နိုင်ငံခြားမှာတောင် မြန်မာမှုကိုပြသခဲ့တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
May 31, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီ / အနုပညာသတင်းNo Comment on နိုင်ငံခြားမှာတောင် မြန်မာမှုကိုပြသခဲ့တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ အားလုံးရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲ ပြင်ပနိုင်ငံမှာတောင် မြန်မာဆန်ဆန်ဖက်ရှင်လေးနဲ့ မြန်မာမှုကိုပြသခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်..။ ခေးလေးလို့ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေးခင်ဝင့်ဝါကတော့ လတ်တလောမှာ ထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး DR.WU ရဲ့ Head office ကို သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။…
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကိုကိုဦး ရဲ့ သားလေး သီဟအောင်
May 31, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီNo Comment on အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ကိုကိုဦး ရဲ့ သားလေး သီဟအောင်
တစ်ချိန်တုန်းက အနုပညာလောကမှာ လူဆိုးကာရိုက်တာများဖြင့် ပရိသတ်သတိထားမိခဲ့သော နာမည်ကျော် မင်းသား ကိုကိုဦး ရဲ့ သားလေး သီဟအောင် ဟာ အခုဆို အသက် ၁၇ ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားသူဖြစ်ပီး ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမည့် အောင်စာရင်းအတွက်လည်း…
ဆံပင်စတိုင်သစ်နဲ့ အပြတ်လန်းနေတဲ့ နန်းသူဇာ
May 31, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီNo Comment on ဆံပင်စတိုင်သစ်နဲ့ အပြတ်လန်းနေတဲ့ နန်းသူဇာ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် မင်းသမီးချော နန်းသူဇာကတော့ ဆံပင်စတိုင်အသစ် ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ လုံးဝကို အပြတ်လန်းနေပြီး ခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင် အရမ်းကို ဂေါ်တဲ့ ဆံပင်စတိုင်ကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တာပါ။ Shaved Hair Style ကို ပြောင်းလိုက်တာပါ။ ဘေးတစ်ခြမ်းကို…
ပရိသတ်တွေကြား ဂယက်ထသွားတဲ့ ယဉ်လတ်နဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ ဓါတ်ပုံများ
May 30, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဆယ်​လီNo Comment on ပရိသတ်တွေကြား ဂယက်ထသွားတဲ့ ယဉ်လတ်နဲ့ နန်းသီရိမောင်ရဲ့ ဓါတ်ပုံများ
ယဉ်လတ်ကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ဖိုက်တင်မင်းသမီးလေး ဆိုပြီး နာမည်ကြီးသူပါ။ ဖိုက်တင်ကားတွေ အရိုက်များတဲ့ သူမဟာ အခုဆိုရင်တော့ ဖိုက်တင်မဟုတ်တဲ့ တခြားဇာတ်ကား အမျိုးအစားအစုံ ရိုက်ကူးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖိုက် တင်မင်းသမီးလေးနဲ့ မော်ဒယ်မင်းသမီးလေး နန်းသီရိမောင်တို့ ရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ…